Inona no atao hoe DIABETA ?
Diabeta, insuline, glycémie, glucose, glucomètre, voka-dratsy, aretina,... Inona marina ny diabeta ?
Ny diabeta dia toe-tena fa tsy aretina, tsy misy fanafody nefa azo fehezina tsara. Ny diabeta dia tsy fahaizan'ny vatana mampiasa ny siramamy entin'ny sakafo noho ny tsy fahampian'ny hormonina atao hoe insuline izay vokarin'ny sarakaty na tsy fisiany tanteraka.
Izay indrindra no mitarika ny karazany ho toy izao :
Diabeta Type 1
Diabeta Type 2
Misy koa nefa ny diabeta noho ny antony hafa (diabète secondaire).
Ny insuline no fanalahidy mampiditra ny siramamy (glucose) any amin'ny selan'ny vatana iray manontolo mba entina hiasa araka ny tokony ho izy ka hivadika ho hery azo ampiasaina.
Raha toa ka tsy ampy ny insuline na tsy misy mihitsy dia miangona any anaty rà ilay siramamy azo avy amin'ny sakafo ka mampiakatra ny tahan'ny siramamy (hyperglycémie). Izany fiakaran'ny tahan'ny siramamy ao anaty rà izany dia mitarika fahafoazana eo amin'ny maso, voa, retsika, fo, lalan-dra (ireo voka-dratsin'ny diabeta).
Araka ny famaritana ny diabeta hoe tsy fahaizan'ny vatana mampiasa ny siramamy azo avy amin'ny sakafo noho ny tsy fahampian'ny insuline ka manjary miangona ao anatin'ny rà ny siramamy dia toy izao ny fatra ilazana fa diabetika ny olona iray :
raha tsy nisakafo : mihoatra ny 1,26g/l ny glycémie an'ilay olona,
raha avy nisakafo kosa : mihoatra ny 2g/l ny glycémie an'ilay olona.
15 votes. Moyenne 1.93 sur 5.